Windows XP को लागि साइडबार: कार्य, सुविधाहरू, र बेफाइदा
लागि साइडबार के हो Windows XP र यो कसरी काम गर्छ? यस लेखमा हामी सबैभन्दा विस्तार प्रश्न यो क्षेत्र संग सम्बन्धित छलफल गर्नेछन्। सबै को पहिलो, एक साइडबार Windows XP को लागि - दाँया मा स्थित छ स्क्रिनको, ठाडो धारी, जो ग्याजेटहरू को एक विस्तृत विविधता समायोजित गर्न सक्छन्। तिनीहरूले प्रक्रिया अनुगमन र यसको अपरेटिङ सिस्टम नियन्त्रण गर्न प्रयोगकर्ता सुविधा गर्न आवश्यक छ। खैर, प्यानल Windows XP लागि हो भने स्क्रिनको किनारा संलग्न आवश्यक छ, र अक्सर यो राहत छ विन्डोज7प्यानल रोक्छ। यो प्रणालीमा Ancillary ग्याजेटहरू तपाईं कहाँ गर्न "अपनाउँछन्", र अधिक व्यावहारिक छ जो आफ्नो विकल्प, आकार र आकार परिवर्तन गर्नुहोस्।
Windows XP पक्ष प्यानल लागि ग्याजेटहरू
सबै भन्दा लोकप्रिय किसिमहरु निम्न छन्:
- घडी, जो डिजिटल र एनालग दुवै हुन सक्छ। निश्चित छ डेस्कटप तस्वीर, दिन को समय संग हल्का परिवर्तन छ जो मा समय गणना गर्न विशेष तरिकामा पनि छन्। तर यो Windows XP को लागि थप्नुहुन्छ नवीनतम संस्करण को एक, र कम्तिमा 8 गिगाबाइट को राम को मात्रा हुनुपर्छ छ। यसबाहेक, घडी अझै पनि कम्प्युटर को सञ्चालन समय गणना गर्न सक्नुहुन्छ।
- इनबाउन्ड-आउटबाउन्ड यातायात व्यवस्थापन गर्नुहोस्। ती लागि अत्यन्तै उपयोगी सुविधा गर्ने इन्टरनेट जडानहरू संग सीमित दर प्रयोग गर्नुहोस्। बिर्सेका मा तपाईं प्राप्त गर्न र छोटो अवधि सबै ट्राफिक खर्च छैन, यो ग्याजेट निरन्तर अर्थव्यवस्था को स्मरण गराउन हुनेछ।
- राम र CPU लोड हुँदै। अर्को धेरै रोचक ग्याजेट netbooks वा कमजोर कार्यालय कम्प्युटर को प्रयोगकर्ताहरूको लागि। यो क्रम स्रोतहरू सुरक्षित गर्न र प्रक्रिया गति बढाउन कार्यक्रम पहिचान र क्षणमा अनावश्यक असक्षम गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
- नोट्स। हामी शायद प्रत्येक पटक मेरो जीवन आफ्नो रेफ्रिजरेटर पहेंलो गर्न चिपके मा जहाँ तपाईं टिप्पणीहरू, मेमोहरू र टिप्पणीहरू छोड्न सक्नुहुन्छ पात, आंसू। Windows XP को लागि साइडबार तपाईं सही डेस्कटपमा आफैलाई छोटो सन्देश त्यहि पात ठीक राख्न मौका दिनुहुन्छ।
- मिनी-खेल। समय कसरी बित्छ र आफैलाई कामबाट अलि आराम दिन? निस्सन्देह, खेल को मद्दतले। छेउमा प्यानल तपाईं मात्र प्ले गर्न अनुमति दिन्छ, तर पनि सावधानी यो गर्न! चेस, परीक्षक, बैकगैमन, पासा, पहेली खेल र अझ थप।
- पात्रो-आयोजक। यो अनुप्रयोग यो सम्भव अप एक हप्ताको, महिना वा वर्ष को लागि कार्य को स्पष्ट योजना आकर्षित गर्न बनाउँछ। पप-अप सन्देशहरू, साथै अन्य अनुकूलन सुविधाहरू, आयोजक निरन्तर तपाईं कुनै पनि दिन के गर्नुपर्छ भनेर सम्झाउने।
निस्सन्देह, Windows XP को लागि एक साइडबार प्रणाली को विकासकर्ताले उपलब्ध छैन, तर तपाईं स्थापना गर्दा Vista वा Windows7मोडेल, तपाईं उपलब्ध विकल्पहरू सबैभन्दा व्यापक दायरा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र Vista प्यानल सर्वश्रेष्ठ गर्दा विन्डोज7ग्याजेटहरू थप, विविध प्यारा र स्मार्ट छन्, किनभने सानो स्मृति खपत को कमजोर व्यक्तिगत कम्प्युटर लागि उपयुक्त छन् भनेर सम्झना। एक विकल्प गर्दा, तपाईं पहिले आफ्नो पीसी को प्रदर्शन सुरु गर्नु पर्दछ, वा सान्त्वना सट्टा तपाईं जोखिम कहिल्यै टोपी अपरेटिङ सिस्टम ड्रप रही।
हार्ड डिस्क आरम्भ भएको छैन: के गर्ने?
अब तपाईं तय गर्न सक्छन् विन्डोज 10 सिस्टम अद्यावधिक हुनेछ जब!
सन्देश: "तपाईंको कम्प्युटर VAC सिस्टम अवरुद्ध छ।" कसरी मैले गर्नुपर्छ?
सम्भावित असफलता र उपचार: मा "एन्ड्रोइड" समावेश छैन वाइफाइ
डेस्कटपमा प्रतिमा कसरी वृद्धि गर्न। दुई सजिलो तरिका
मुसा क्यान्सर मानिस: विशेषताहरु, अनुकूलता र रोचक तथ्य
Chlamydomonas: संरचना र संगठन को विशेषताहरु
पोर्ट प्रकृति विलासिता Resort होटल र स्पा 5: * फोटो, समीक्षा
कोरियाली टमाटर। व्यञ्जनहरु।
सिरियल हत्यारा Nikolai Dzhumagaliev: जीवनी
"उच्च Stakes" - "द Witcher 3" को खण्ड: साहसिक
Itten रंग पाङ्ग्रा: यो के हो र तिनीहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने
बच्चा ब्रोंकाइटिस। हामी कसरी यो व्यवहार गर्छन्?
विवरण र ठेगाना होटल "Slavyanka" को। होटल "Slavyanka": समीक्षा, फोटो
Tissot लागि पट्टा हेर्छ। मूल कहाँ किन्न?